Weijie2Myanmar Clothing Co.ltd workers’ strike – CTUM
Published by ctum at December 10, 2019
Weijie2Myanmar Clothing Co.ltd workers’ strike ended successfully after2days strike. IWFM/CTUM့ helped negotiation and signed agreement by parties. Now workers resumed working.
အမှတ်​ ၃၁၇၊ ဝပ်​မစွပ်​ဝန်​​ထောက်​လမ်း၊ ​ရွှေလင်​ဗန်းစက်​မှု့ဇုန်​၊လှိုင်​သာယာမြို့နယ်​ရှိ weijie2Myanmar Clothing Co.ltd မှ အလုပ်​သမား ၇၀၀ ​ကျော်​တို့သည် 9.12.2019ရက်​​နေ့​ နေ့လယ်​တွင်​ ​တောင်းဆိုချက်​ ၂၆ချက်​အား ​ စတင်​ဆန္ဒ ထုတ်​​ဖော်​ခဲ့ကြပြီး 10.12.2019 ရက်​​နေ့တွင်​ လုပ်​ငန်းခွင်​၌ IWFM/CTUM ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဝင်​​ရောက်​ညှိနှိုင်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ညှိနှိုင်းမှု အောင်မြင်၍ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fftub.burma%2Fposts%2F1260282507516182&width=500″ width=”500″ height=”987″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>